China L-Leucine CAS 61-90-5 yeParamma Giredhi (USP) vagadziri uye vanotengesa | Honray
Chigadzirwa Chigadzirwa :: L-Leucine
L-Leucine (Akapfupikiswa Leu) ndeimwe ye18 yakajairika amino acids, uye imwe yeasere akakosha amino acids panyama yemunhu. Inodaidzwa kuti branched chain amino acids (BCAA) ine L-Isoleucine uye L-Valine pamwechete nekuti zvese zvine methyl yecheni ketani mune yavo mamorekuru mamiriro.
Seyakakosha amino acid, inogona kushandiswa sekuwedzera kwekudya uye inowanzo shandiswa muchingwa uye zvigadzirwa zvechingwa. Inogona zvakare kushandiswa mune yeamino acid mhinduro yekugadzirira, ichideredza glucose yeropa. Kunze kwezvo, zvakare inogona kushandiswa kusimudzira kukura kwezvirimwa.
Leucine inogona kushandiswa sekuwedzera kwekudya zvinovaka muviri, zvinwiwa uye zvinonhuwira. Inogona kushandiswa kugadzirira amino acid kuwedzerwa uye synthesized amino acid jekiseni, hypoglycemic mumiriri uye chirimwa kukura chinosimudzira mumiririri.
Mabasa aLeucine anosanganisira kushandira pamwe nesoleucine uye valine kugadzirisa mhasuru, kudzora glucose yeropa uye kupa muviri simba. Iyo zvakare inogona kuvandudza kubuda kwehomoni yekukura, kubatsira kupisa visceral mafuta; mafuta aya ari mukati memuviri uye haakwanise kuve anoshanda anodyiwa chete kuburikidza nekudya uye kurovedza muviri.
Leucine, isoleucine, uye valine mabranched macheni amino acids, ayo anobatsira kusimudzira mhasuru kupora mushure mekudzidziswa. Leucine ndiyo yakanyanya inoshanda branched cheni amino acids iyo inogona kunyatso kudzivirira kurasikirwa kwemhasuru sezvo ichigona kukurumidza kugadziriswa uye kushandurwa kuita glucose. Kuwedzera glucose kunogona kudzivirira kukuvara kwemhasuru yemhasuru, saka inonyanya kukodzera kuvaka muviri. Leucine inovandudza kupora kwemafupa, ganda uye nyama dzakakuvara, kuitira kuti vanachiremba vanowanzo kuraira kushandisa leucine yekuwedzera mushure mekuvhiyiwa.
Zvakanakisa zvekudya zve leucine zvinosanganisira mupunga wakasviba, bhinzi, nyama, nzungu, chikafu chesoya, uye tsanga dzese. Sezvo iri mhando yakakosha yeamino acid, zvinoreva kuti haigone kugadzirwa nevanhu pachavo uye inogona kuwanikwa chete nekudya. Vanhu vanoita musimba masimba zviitiko zvemuviri uye kuwana yakaderera mapuroteni chikafu vanofanirwa kufunga nezvekuwedzera leucine. Kunyangwe iyo inogona kunyorera yakazvimiririra yekuwedzera fomu, inosarudzwa kuti iwedzerwe pamwe ne isoleucine uye valine. Naizvozvo iyo yakasanganiswa mhando yekuwedzera iri nyore.
Yese ndiro kuverenga
Pashure: Glycine CAS 56-40-6 yeParma Giredhi (USP / EP / BP)
Zvadaro: L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yePharma Giredhi (USP)
Pharm Giredhi L-Leucine, Kudya Kwemhuka, L-Threonine Pharm Giredhi, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, L-Valine 72-18-4,